China Polyethylene Glyeol 400 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Izicelo eziphambili:I-Polyethylene glycol 400 ilungele ukulungiselela eyona philisi ithambileyo. I-polyethylene glycol 400 lulwelo kwaye inokudityaniswa ngokubanzi kwezinyibilikisi ezahlukeneyo, ke sisinyibilikisi elungileyo kunye nesinyibilikisi kwaye sisetyenziswa ngokubanzi kumalungiselelo olwelo, njengesisombululo somlomo, amathontsi wamehlo njalo njalo. Xa ioyile yemifuno ingakulungelanga ukwenza izinto ngokubambisana, i-polyethylene glycol yeyona nto ikhethwayo yokubambela kuba i-polyethylene glycol izinzile kwaye ayinakonakala. Ngaphandle koko, iinaliti eziqukethe i-polyethylene glycol zikhuselekile kwaye zizinzile okoko nje zifudunyeziwe zaya kutsho kwi-150 degrees Celsius. Ukongeza, inokudibana ne-PEG enobunzima obuphezulu beemolekyuli kwaye umxube unokunyibilika okuhle kunye nokuhambelana kweziyobisi.
Ukugcina kunye nokuThutha:Le mveliso ayinabungozi, ilangatye libuyisela, njengokuthunyelwa ngokubanzi kweekhemikhali, zitywinwe kwaye zigcinwe kwindawo eyomileyo.
I-PEG-400: I-PEG-400 yeyona ilungele iipilisi ezithambileyo. Kuba i-PEG400 lulwelo, inokudityaniswa ngokubanzi kwezixazululi ezahlukeneyo. Isinyibilikisi elungileyo kunye nesinyibilikisi. Isetyenziswa ngokubanzi kumalungiselelo alulwelo, afana nolwelo lomlomo, amathontsi wamehlo njalo njalo. Xa ioyile yemifuno ingakulungelanga ukuphatha izinto ezisebenzayo, isikhonkwane lukhetho lokuqala. Oku ikakhulu kungenxa yokuba isikhonkwane sizinzile kwaye akukho lula ukonakala. Xa inaliti ene-PEG ishushu ukuya kwi-150 150, ikhuselekile kwaye izinzile. Ukongeza, inokuxutywa kunye nobunzima obuphezulu beemolekyuli (i-PEG), kwaye umxube unyibilikile kwaye uhambelana kakuhle neziyobisi.
I-PEG-400, 600, 800: isetyenziswa njenge matrix yamayeza kunye nezithambiso, igrisi kunye nearhente yokumanzisa kumzi mveliso werabha nakwimizi-mveliso yempahla eyolukiweyo. Ukongeza i-PEG-600 kwi-electrolyte kwimizi-mveliso yesinyithi kunokuphucula ukusebenza kokugaya kunye nokunyusa ubumenyemenye bomphezulu wesinyithi.
Egqithileyo IPolyethylene Glyeol 200
Okulandelayo: I-PEG 600 Polyethylene Glyeol 600